I-Durcal, iwotshi yendawo eneGPS yabantwana kunye nabantu abadala | Izixhobo zeNdaba
UMiguel Hernandez | 30/03/2022 10:00 | elektroniki, ngokubanzi, Reviews, SmartWatch
Uthungelwano ngomnxeba kunye nezinto ezinokwenzeka ezinikezelwa kuthi ukuze sifumane abantu abadala kunye nabantwana ngoku zifikeleleka kakhulu kwaye ziyafikeleleka. Inketho yokugqibela efikile kwitafile yohlalutyo ivela kwinkampani entsha ebizwa ngokuba yi UDurcal kwaye siza kuyihlalutya ukuze sibone ukuba ibonelela ngezakhono ezitsha kweli candelo.
Sihlalutya ukuba zeziphi iimpawu kunye nokusebenza kwayo ukuze sazi apho abantwana bakho abancinci ngamaxesha onke kwaye, ewe, kunye nabadala bakho.
2 Iimpawu kunye nokusebenza
Iwotshi elula nesebenzayo. Inepaneli encinci kodwa ibonakala ngokwaneleyo, kuyo sinolwazi olusisiseko olufana nebhetri, amanyathelo athathiweyo, umhla kunye ne-mobile coverage. Ukwenziwa ngokwezifiso okuncinci kulo mba.
Isongo sikhanya kakhulu, sidityaniswe kumzimba we-silicone, Izikhonkwane ezimbini zokutshaja kunye ne-oxygen yegazi kunye ne-pulse sensor zihlala kwindawo yayo ephantsi. Ezi zimbini zizona zodwa i-sensor isixhobo esinayo kwinqanaba lezakhono, ngaphezu kwezinye iimpawu zobugcisa esiza kuthetha ngazo ngezantsi.
Iimpawu kunye nokusebenza
Kwinqanaba loyilo kunye nelokuvelisa, iwotshi ifuna ukulula, Ubuncinci kunye nokuchasana, ngaphandle kokuzenzisa. Isikrini asithinteli, ukuhamba ngeendlela ezikhethiweyo siya kucinezela iqhosha eliphakathi, ngentliziyo ebomvu njengesalathisi. Ngayo sinokubona ukubetha kwentliziyo, ioksijini yegazi, imiyalezo kwaye ekugqibeleni sicime iwotshi.
Iwotshi ine-microphone, isithethi kunye ne-mobile coverage, njengoko sesitshilo, iyenzile eyakho nanoSIM khadi ifakiwe. Ukuyibeka kufuneka sisuse izikrufu ezimbini ezincinci kunye ne-screwdriver efakiwe. Ngokwenxalenye yayo, ikwanayo nesilumkiso sokuwa, iwotshi iya kuyibona ngokuzenzekelayo kwaye ithumele isilumkiso kwisicelo seDurcal.
Ngoku lixesha lokuthetha ngesicelo. Yinto yokuqala ekufuneka siyikhuphele, ngokupheleleyo Isimahla kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS kwaye iyasivumela ukuba sifumane iwotshi, silawule ezinye iiparamitha, siyingqamanise kwaye, kunjalo, sifumane izilumkiso ezikhankanywe ngasentla.
Inkqubo ungqamaniso ilula:
Sikhuphela usetyenziso kwaye senze iakhawunti ngefowuni yethu
Sivula iwashi emva kokufaka i-nanoSIM
Siskena ibhakhowudi nge-IMEI
Iwotshi kunye ne-app iya kulungelelanisa ngokuzenzekelayo
Inyani yeyokuba inkqubo yongqamaniso ilula kakhulu kwaye iyaxatyiswa. Nangona kunjalo, asimele silibale ukuba oku kuya kufuneka ukuba sazise ikhadi elibandakanyiweyo, kwaye ngokuqinisekileyo ikhontrakthi yesicwangciso seMovistar Prosegur Alarmas:
Intlawulo yenyanga kunye nokuhlala kweenyanga ezilishumi elinesibini ze-€ 19 / ngenyanga
Intlawulo yonyaka ye-190 €
Kufuneka sithathele ingqalelo into yokuba ukuba siyayirhoxisa inkonzo phambi konyaka, kuya kufuneka sihlawule iintlawulo zenyanga ezishiyekileyo ukuya kutsho kwiinyanga ezilishumi elinesibini. Ewe ngokunjalo, zonke ezi zicwangciso ziquka iwotshi ngokupheleleyo simahla.
Ngamafutshane, le nkqubo yokuhlawula umrhumo iya kusivumela ukuba sibe nabantwana bethu, abantu abadala kunye nabaxhomekeke kubo "balawulwa". Ngokucofa imizuzwana emi-3 kwiqhosha kuphela elinalo, Siye sakwazi ukuqinisekisa ukuba kwimizuzwana embalwa iingcali zeMovistar Prosegur Alarmas zidibana njani nokuqinisekisa imeko yomsebenzisi kwaye zingenelele xa kukho imfuneko, ukongeza koku:
Fumana izilumkiso kwi-Durcal app malunga nalo naluphi na uhlobo lokuwa
Hlalutya iimpawu ezibalulekileyo zomsebenzisi wewotshi
Ukulinganisa amanyathelo kunye nokulawula iindlela ezenziwe yiGPS
Izaziso zokufika kunye nokuhamba ukuya kwiindawo eziqhelekileyo
Indawo yangoku ngeGPS
Ukuzimela malunga neentsuku ze-15
Ngokungathandabuzekiyo enye indlela yokukwazi ukufumana uxolo lwengqondo, ngexabiso, ngokuqinisekileyo, kodwa inika kanye oko ikuthembisayo ngokubhekiselele ekusebenzeni kunye nobuchule, ngaphandle kokunyenyisa ngaphaya koko kubonelelwe kwikhathalogu. Unokuyithenga ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yayo okanye ngokufowunela 900 900 916 kunye nesivumelwano sesicwangciso esanelisa kakhulu, uya kusifumana kwisithuba seeyure ezingama-48 zekontraka.
Ithunyelwe nge: 30 Matshi we2022
Utshintsho lokugqibela: 27 Matshi we2022
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Durcal, iwotshi yendawo eneGPS yabantwana kunye nabantu abadala